Hal arrin oo Macallinka Kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjaer loo ceyrin karo suuqa xagaaga – Gool FM
(Manchester) 10 Feb 2020. Sida wararku ay sheegayaan waxaa jira hal arrin oo loo cayrin karo suuqa xagaaga hoggaamiyaha haatan ee Kooxda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.
Waxaa wali sii socda wararka sheegaya in Mauricio Pochettino uu badal u noqon doono Ole Gunnar Solsjaer, islamarkaana uu maamulayo kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford, waxaana xusid mudan in macallinka Man United uu wali taagero buuxda ka haysto Ed Woodward.
Hoggaamiyaha Argentine ayaa Tottenham laga ceyriyay bishii November, laakin sida laga soo xiganayo Jariiradda “The Mirror” macallinkan ayaa la la xiriirinayaa inuu dib ugu soo laabanayo horyaalka Premier League oo uu majaraha u qabanayo Man United.
Man United ayaa fadhisa booska 8-aad ee jadwalka kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo kulankeedii ugu dambeeyayna barbaro goolal la’aan ah la gashay Wolves.
Ed Woodward ayaa ka caawiyay in kooxdu ay la soo wareegaan Bruno Fernandes bishii tagtay, nasiib xumase waxaa kooxda dhaawac kaga maqan Paul Pogba iyo Marcus Rashford, kuwaas la heli doono bisha Maarso ee soo aaddan.
Haddaba, Jariiradda The Mirror ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in Ole Gunnar Solsjaer kooxda laga ceyrin doono haddii uu ku guul darreysto inuu qeyb ka noqdo kooxaha sare, isla markaana uu awoodi waayo inuu kooxda u soo saaro Koobka Horyaallada Yurub ee Champions League.
Tababaraha Kooxda Barcelona ee Quique Setién oo ka hadlay guushii dirqiga ahayd oo ay ka soo gaareen Real Betis